Rasaasa News – Abaar Laga Soo Sheegay Gabalka Ogaden
Abaar Laga Soo Sheegay Gabalka Ogaden
on February 27, 2014 3:49 pm
Jijiga, Feb 27, 2014 – Wararka ka imanaya magaalo madaxda gabalka Shabelle Godey, ee Ismaamulka Somalida Itobiya [ISI], waxay sheegayaan in abaar iyo biyo la,aan badan ay ka jirto gabalka Shabeelle iyo gabalada dariska la ah. Sidaas waxaa sheegay warar madax banaan oo ka imanaya gabalka Shabeelle.
Warku wuxuu sheegay in abaartan uu sababay Jiilaalka oo dheeraaday, ka dibna ay timid xaalufka cawska iyo biyo la,aanba.
Abaartu waxay si adag u saamaysay dadka reer miyiga iyo xoolahooda, ka dib kolkii ay biyo yaraadeen ceelashii ay ka cabi jireen, isla markaasna uu xaaluf keenay Jiilaalku.
Dadka reer miyiga ah ayey noloshooda oo dhan ku xidhan tahay manaafacaadka laga helo xoolaha nool. 80%-tan dadka degan gabalka Ogaden waa dad xoolo dhaqato ah, dadka reer magaalka ah laftigooda ayey noloshoodu si dadban ugu xidhan tahay intifaaca laga helo xoolaha nool.
Roobabka guga ayaa la sugayaa in ay ka bilowdaan gabalka Ogaden badhtamaha bisha March. Hadii uu daba maro xiligaasna waxay abaartu si xoog leh u saamayn doontaa dadka iyo duunyadaba.
Ma jiraan wax diyaar garow ah oo ay samaynayso dadwlada Itobiya, hadii ay roobabku di,i waayaan xiliga la sugayo.
Ismaamulka Somalida Itobiya, ayaan isagu xiidhiidh toos ah la lahayn dadka xoola dhaqatada ah ee degan dhulka ka durugsan xarunta Ismaamulka Somalida Itobiya [ISI] ee Jijiga. Waxaana uu lagu baraarugaa xili ay dhibaatadu xad dhaafto.